Itekhnoloji yeNdlela yeTekhnoloji eSpain kunye nezoBunjineli boLuntu e-China kwiminyaka emi-4 kuphela-iGeofumadas
NgoJulayi, 2015 Ukufundisa i-CAD / GIS, Zobunjineli, Ezahlukeneyo
University of Burgos une intsebenziswano umdla neYunivesithi Chongqing Jiaotong China, apho Amanqanaba Engineering Technology Highway kunye iqondo Civil Engineering e-China thembisa ukuba acinga ntoni na ngeprojektha yangoku elizayo ngamazwe lo msebenzi.
Degree in Engineering Technology Pathways kunye Master of Civil Engineering, Channels kunye Ports amandla ukuze kuzokulawulwa uvumo Civil Engineer, Channels kunye namazibuko kunye onke amalungelo umthetho kubanika uxanduva lootitshala.
Emva kweminyaka emine umfundi uya kufumana zombini izihloko kunye kwinqanaba olwaneleyo ezi lwimi zintathu ezithethwa kweli hlabathi: IsiNgesi, iSpanish and Chinese.
Ukuze wenze oku, abafundi zeeyunivesithi zombini kuya kufuneka ukuba benze izifundo ezimbini kwiyunivesithi ekhaya kunye kwiminyaka emibini yokugqibela kwenye iyunivesithi. Iminyaka emibili yokuqala umfundi uya kufunda ngeelwimi leyunivesiti, unyaka wesithathu ngesiNgesi nangonyaka ophelileyo ngolwimi lokuya kwiyunivesithi.
Ewe kunjalo, ukulungiselela oku, kunyanzelekile ukuba kufundwe iiyure ezintlanu ngesiTshayina kwiziko le-UBU kwiiLwimi zangoku kwaye, ukongeza, iYunivesithi yaseChongqing Jiaotong iceliwe ukuba ifundise iiklasi zamaTshayina kubafundi be-UBU ngendlela kunyanzelekile, kunyaka wesithathu nowesine, xa sele befunda eChina.
Chongqing University, awayibingelelayo kunyaka wayo wesine ithuba lokuba babhalise kwiikhosi program Inglés Friendly. Iziseko eziqhelekileyo kule nkqubo kukuba ootitshala, ngokufunwa, baya kunika ulwazi lokufundisa ngesihloko ngesiNgesi kwaye baya kunika ithuba lokufunda kunye novavanyo kwiNgesi.
Abafundi kufuneka babe ne-B2 yeNgesi ngaphambi kokugqiba ikhosi yesithathu.
Ukongeza, iiyunivesiti ziya kubandakanya iiprogram host ezizodwa, swi aba bafundi ukuba ababonise izibonelelo, iinkonzo, ufikelelo, bencedisana nabo kwiingxoxo zokufunda nje kuphela, kodwa nabanye njengoko ekufumaneni yokuhlala.
Olunye ulwazi kwi Ikhasi leBU.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iimephu zeWebhu zivuselela iimephu zembali
Post Next I-CAST-Isoftware yasimahla yohlalutyo lolwaphulo-mthethoOkulandelayo »